Fitaovana fandrendrehana fandrahoana metaly ho an'ny vy, vy, vy vy, sns.
Home / Applications / Induction Melting / Lafaoro fanalefahana vy
Sokajy: Fitrandrahana famonoana menaka, Gold Furnace Furnace, Fandoroana fanalefahana amin'ny famokarana tavy, Induction Melting, Induction Melting Furnace, Afo Fandoroana vy Tags: lafaoro fampidirana varahina, Fitrandrahana famonoana menaka, volamena, lafaoro fampidirana igbt, induction furnace, induction furnace manufacturer, induction fusion fio, lafaoro fanalefahana metaly, fofona fandokoana fofona, lafaoro vy matevina, lafaoro fampidirana vy, lafaoro fandrendrehana, lafaoro ao anaty lafaoro, fandrehitra lafaoro matanjaka
Lafaoro fampidirana vy mihombo IGBT matetika
Fampiharana fanamafisana induction:
Ny lafaoro fanamafisam-peo fanamafisam-peo matetika dia ampiasaina amin'ny fihenan'ny vy, vy tsy misy fangarony, varahina, varahina, volafotsy, volamena, ary fitaovana vita amin'ny aliminioma, sns. Mety ho avy amin'ny 3KG ka hatramin'ny 2000KG ny fahaizan'ny mitsonika.
Firafitry ny lafaoro fampidirana vy nandrendrika MF:
Ny setroky ny lafaoro fampidirana dia misy mpamokatra hafanana antonony, famerenana capacitor ary lafaoro miempo, sensor sensor mari-pana infrared ary mpanara-maso ny mari-pana dia azo ampidirina koa raha baikoina.
Karazana lafaoro mitsonika telo no azo aorina araka ny fomba fandrotsahana azy ireo, dia fatana fandoroana, lafaoro manosika ary lafaoro mijanona.
Araka ny fomba famafazana, ny lafaoro famonoana dia mizara ho karazany telo: fatana fandoroana tanana, fatana fandoroana herinaratra ary fatana fandoroana hydraulic.
Mampiavaka ny fatana fandrendrehana MF:
1. Ny milina mitsonika MF dia azo ampiasaina amin'ny fihenan'ny vy, vy tsy misy fangarony, varahina, aliminioma, volamena, volafotsy sy ny sisa. Noho ny fientanentanana vokarin'ny herin'ny andriamby, ny dobo mitsonika dia azo esorina mandritra ny fihodinana hanamorana ny fitsingevanan'ny flux sy ny oksida hamokarana faritra avo lenta.
2. Ny elanelam-potoana midadasika dia manomboka amin'ny 1KHZ ka hatramin'ny 20KHZ, ny fahita matetika miasa dia azo noforonina tamin'ny fanovana ny coil sy ny compensating capacitor arakaraka ny fitaovana miempo, ny habetsahana, ny faniriana vokatry ny filàna, ny tabataba miasa, ny fahombiazan'ny fiempo ary ny anton-javatra hafa.
3. Ny fahombiazan'ny herinaratra dia 20% avo kokoa noho ny milina mpanelanelana amin'ny SCR;
4. Kely sy maivana, maodely marobe no azo ahodina handrendrika metaly samihafa. Tsy mety amin'ny ozinina fotsiny izy io, fa mety amin'ny oniversite sy orinasa mpikaroka ampiasaina koa.
Ny toetra mampiavaka ny MF Induction Fusion Furnace
Ny ampahany manan-danja ao amin'ny rafitra fandefonana afon-koditra:
Ampitahao amin'ny fanalefahana fitaovana hafa
1, lafaoro fanoherana VS
a, Fahombiazan'ny hafanana avo, miempo haingana.
b, habe kely, mitsitsia angovo 30%.
c, Ny fanoherana na ny tahiry karbôna silika mora simba.
2, VS Coal, Gas, lafaoro diesel
a, Manamora ny firafitry ny vahaolana fanitsiana sy ny maripana, ny fantsom-pandrefesana latsaka ny 1/3 ka hatramin'ny 1/4, mandà ny tahan'ny fidinana 1/2 ka hatramin'ny 2/3, ka ny tanjaka dia manana tanjaka mekanika ambony kokoa;)
b, Mihena ny fitrandrahana entin'ny fandoroana;
c, ny fanalefahana induction dia afaka manalefaka ny fanodinana sy ny sombin-javatra kely noho ny fientanentanana elektromagnetika .mampihena ny vidin'ny fitaovana .Mampihena ny fandotoana ny tontolo iainana; ny tabataba dia ambany lavitra noho ireo fitaovana avo lenta. nohatsaraina ny hamafin'ny mpiasa sy ny toe-piainana;
d, ny vy fanariana vy ampiasaina amin'ny lafaoro arina sy aratra dia manimba ny firaka aliminioma amin'ny fampitomboana ny fahalotoana. Fitaovana grafika ampiasaina amin'ny fikolokoloana fampidirana tsy misy fatiantoka toy izany.)
3, VS SCR na lafaoro mitsonika matetika
b, habe kely, mitsitsia angovo mihoatra ny 20%.
c, kely dia kely ny vokatry ny fanetsiketsehana elektromagnetika ka itarina ny ain'ny serivisy.
d, Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny matetika hahatratrarana fifehezana herinaratra, noho izany haingana haingana, singa malemy kokoa noho ny fihenan'ny angovo ary ny fitehirizana angovo tsara kokoa, indrindra ny fanamafisana ny vy tsy metaly, varahina, silikone, aliminiana ary fitaovana hafa tsy misy andriamby, ka mampihena ny vidin'ny fandefasana.